Abenzi Bezokwelapha - I-China Medical Factory & abahlinzeki
Ishubhu yomhlahlandlela wokusiza ukucindezeleka
✭ Inkampani yethu inolwazi kakhulu emkhakheni wezikhunta zepulasitiki zama-catheters ezokwelapha. Hhayi ukukhiqizwa kwesikhunta kuphela, kepha futhi ne-medical-grade injection injection. Izinto zepulasitiki ezisetshenziswe ku-catheter yezokwelapha zibiza kakhulu futhi zidinga isikhunta sekhwalithi ephezulu kakhulu. Imbobo yangaphakathi yomkhiqizo ingu-1.27mm kuphela ububanzi. Ukufakwa kwethu kwesikhunta kwenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme ze-SKH51. Le nto ingaqinisekisa ukubekezelelana kwemigodi emincane futhi iqinisekise impilo yenkonzo yokufakwa kwephini.
✭ Izinto zepulasitiki zalesi catheter ziyizinto ezingama-65 ezithambile. Ngesikhathi senqubo yokubumba umjovo, kunzima ukudiliza. Ngokuthuthuka kwethu kwezobuchwepheshe, umkhiqizo wethu wamanje wesikhunta ubushelelezi futhi umjikelezo wokujova ufinyeziwe. Njengamanje, umjikelezo wethu wokubumba umjovo ngamasekhondi ayi-16, okusindisa isikhathi sokulethwa nezindleko kumakhasimende ethu.
✭ Iqoqo lethu lesikhunta lenziwe ngezinto ezilukhuni ze-S136, futhi impilo yesikhunta kufanele ifinyelele izikhathi eziyizigidi ezi-1. Enqubo yokukhiqiza umjovo wokubumba, kuyadingeka ukuqinisekisa ukunemba komkhiqizo, futhi kuqinisekiswe ukuthi uzinzile futhi uqinile ngesikhathi senqubo yomhlangano.
Ibhokisi lephilisi lepulasitiki le-7day
✭ Izinsuku eziyi-7 * 7 ibhokisi lamaphilisi okugcina 49 amabhokisi okuqinisekisa umswakama wemithi ngayinye angahlangabezana ngokugcwele nezidingo zakho zansuku zonke noma ngabe usohambweni.Imibala yothingo usuku ngalunye imakwa ngokuhlukile kusivalo ukuze ukwazi ukuhlukanisa kalula okufunayo.Isembozo sepulasitiki esiqinile futhi esiqinile esisezingeni lokudla sizohlala siqinile uma nje usivala futhi singasavuleki. Awukho umuthi ohlakazekile engozini noma kumthelela.Idizayini eyingqayizivele yokubukeka kwe-cylindrical yonga isikhala, ngokungafani namanye amabhokisi wamaphilisi ayingxenye engunxande, angabamba ezinye izinto zokusebenza ezincane.
✭ Isibonelo, iPilisi CUTTER.Usayizi 22.5 x 6 X 27 cm Ibhokisi ngalinye elincane lilinganisa ama-intshi angu-1.06 * 0.23 amayintshi * 0.86 cm, likhulu ngokwanele ngosayizi ohlukile
Le ngxenye yepulasitiki iyingxenye yezihlungi zika-Oyili zokungena kwepulasitiki ezivela kukhasimende lase-USA. Lesi setha sesikhunta sisebenzisa izinga le-DME. Okubalulekile kweCore kuyinsimbi eqinile ye-S136.
✭ Isakhiwo sesikhunta silula, ngezakhi ezimbili ze-Becu ezifaka izakhiwo. Okwenziwe ngomkhiqizo yi-PP, futhi indawo edinga ukwenziwa ibe yiPolish- # 600. Isidingo sokunemba kosayizi womkhiqizo ngu- +/- 0.1. Isikhathi sokulethwa kwesikhunta izinsuku ezingama-35, kanti umjikelezo wokujova ngamasekhondi angama-35. Isikhunta savivinywa kabili kuphela, futhi ikhasimende lasicela ukuthi sihlele ukuthekelisa kufektri yase-USA yokubumba umjovo.
✭ Lapho kwenziwa izingxenye zomjovo obunjiwe kusuka kuplastikhi, izinga lokushisa lesikhunta linethonya elinqumayo kwikhwalithi yezingxenye nesikhathi sokujikeleza. Ukulawulwa kokushisa okuhle ngesikhathi sokucubungula kwe-thermoplastics ngakho-ke futhi kunomthelela oqondile ekusebenzeni kahle komkhiqizo.
✭ Isikhunta somjovo sishiswa ngokujikeleza ngento ejojowe. Ukushisa kuhlakazwa ukuqhutshwa okushisayo kokuqukethwe nangensimbi yesikhunta ebusweni besiteshi sokulawula ukushisa, lapho ukushisa kunikezwa khona ngokudluliswa kokushisa kusetshenziswa lokuhambisa ukushisa okujikelezayo (amanzi noma uwoyela). Iyunithi yokulawula ukushisa iqeda ukushisa kwendawo yokudlulisa ukushisa bese ibuyisela okuphakathi okupholile ekusakazeni.
✭ Iqoqo lethu lesikhunta lenziwe ngezinto ezilukhuni ze-S136, futhi impilo yesikhunta kufanele ifinyelele izikhathi eziyizigidi ezi-1. Enqubo yokukhiqiza umjovo wokubumba, kuyadingeka ukuqinisekisa ukunemba komkhiqizo, futhi kuqinisekiswe ukuthi uzinzile futhi uqinile ngesikhathi senqubo yomhlangano. Yenza ingxenye yethu yogesi izinzile.